Forum serasera malagasy zaza kl ts mator mits sa maditra - Dinika forum.serasera.org
zaza kl ts mator mits sa maditra
Fitohizan'ny hafatra : zaza kl ts mator mits sa maditra
voly - 27/09/2013 12:44
bjr dol ,inona n fomba ampatorina zazakl 2 volana f tena ts met mator mits na alina na atoandro f iz kou somar kl2 , mb valio re ra azo atao f tena rerak b mits
hery - 27/09/2013 16:20
Sao dia mba zaza marary izany???
Ny zazakely tokony mbola hatory be dia be kokoa noho ny mifoha rehefa mbola kely fa ny atahorako hoe sao dia misy mankarary azy.
Mitomany ve izy sa mivandravandra tsy matory fotsiny?
booboo - 27/09/2013 19:04
Ankoatra io ambony io, trotroina anaty écharpe. Sady mampitony no mandrotsirotsy azy ny mihaino ny fidoboky ny fo sy rehefa mihetsika² iny.
Entina mivoaka ny trano miova rivotra matetika, mora matory be mihitsy ny zazakely "voky rivotra "
Rehefa avy mandro iny koa dia atao massage 5min max raha toa ka tiany.
Ny zanako nandritra ny volana maromaro t@ mbola kely tsy mety natory mihitsy raha tsy teo ambony tratrako na ambony tratran'izay olona mampatory azy vao matory. Andramo² ao daholo izay paozy mety ho tiany...
Dia rehefa misy occasions dia avelao trotroin'ny hafa izy dia ianao matoria na ho 10 min fotsiny aza.
Dia tsisy ifandraisany @ torimaso ny hakely na haben'ny zazakely kah. Tsy fantatro hoe nanakory ny accouchement-nao, fa t@ zanako voalohany horrible be ny niainanay mianaka, dia izay no nolazain'ny pédiatre anay hoe misy ifandraisany ny zavatra niainany nandritra ny travail ary après sy ny tomaniny isak'alina (miampy coliques ?).
Ny ahy manokana écharpe no tena nety be tamiko sy ny zanako, vao 5 min atsofoka tao zareo dia renoka, dia avelako ao mandra-pifohany, dia zà resi-tory eo ambony canapé rehefa ohatra izay. Nandreraka fa na micro-sieste de 5 min aza ny ahy @ izany tena efa " alleluiah " gravy mihitsy !
jobiely - 30/09/2013 10:52
mba ento dokotera iany aloha sao misy mahazo azy ka. Ny zanako ko tamin'ny vao 1 volana d naditra be mints amin'ny alina, tsis atorina manomboka amin'ny 8 alina ka hatramin'ny 12 na am 1 maraina fa izy ndray dia matory be otran andro alina mintsy amin'ny atoandro. Feno 3 volana izy vao nahafantatra ny andro sy ny alina zay vao hendry amin'ny alina. Raha zaza vao 2 volana zany tokony mbola tena hatory be mintsy. Raha ts matory alina izy dia tokony mba hatory atoandro. Dia courage enao mitaiza zaza fa toerana ifandimbiasana io e
mirananirina - 03/10/2013 12:15
Ny zaza 2 volana izany aloha mbola taitra @ alina, nefa izy tsy matory atondro ity mahagaga ihany,zaza tokony hatory eo @ 17h/j eo ho eo an na mety + aza.
Andramo horina (massage)moramora matetika ny vatany